Ositiriya - ALinks
Nzira yekuvhura account yekubhangi muAustria?
Dai 5, 2022 Shubham Sharma Ositiriya, Banks
Austria ine zvakawanda zvekupa. Naturalists vanonakidzwa nenzvimbo dzakanaka, mipata yakasvibira, nzizi dzakajeka uye makomo akakomberedza guta reAspen. Vienna, Vienna, Salzburg, Graz, uye Vienna ari pakati pemaguta akanaka kwazvo muAustria, ne
Dai 4, 2022 Demi Ositiriya, Banks
Kune mazana manomwe emabhangi muAustria anosanganisira akabatana-stock mabhangi, mabhangi ekutengesa, mabhangi ekuchengetedza eposvo, uye makambani anokweretesa. Austria ndiyo imwe yenyika dzakapfuma muEuro zone. Uye hurongwa hwebhanga hwenyika zvakare huri kubudirira, uye hunoenderana nepasi rose.
Nzira yekuwana sei visa kuAustria?
April 18, 2022 Demi Ositiriya, visa
Kushanyira Austria nechinangwa chipi zvacho, kungave kuri kwekushanya kana kudzidza kana kushanda. Iwe unofanirwa kuda vhiza yeiyo kana usiri mugari weAustria. Saka heano mamwe mapoinzi kuti iwe ugone kunyorera
Nzira yekuwana sei basa muAustria? Nhungamiro yekukurumidza yevatorwa uye vagari veAustria
December 20, 2021 Demi Ositiriya, mabasa
Kushanda muAustria kunogona kuve kurota kukuru kune wese munhu izvozvi, asi kune zvimwe chokwadi nezve musika webasa. Iwe unofanirwa kuziva kuti usati waita danho. Mune dzimwe nzvimbo, nyika yakatarisana nekushomeka kwevashandi;
Rent uye dzimba muAustria
December 3, 2020 Demi Ositiriya, dzimba
Dzimba muAustria dzine dzimba huru mumaguta makuru nemakottage munzvimbo dzine vanhu vashoma. Dzimba dzinowanzova dzemutengo wepamusoro uye mwero. Nekudaro, vanoenda kune dzimwe nyika uye ex-pats vanofanirwa kuziva kuti nzvimbo zhinji hadzina kugadzirwa kana
Mutengo Wekufamba kuenda kuAustria
October 20, 2020 Demi Ositiriya, famba
Marii inodhura kufamba uye kuongorora yakanaka Austria? Pazororo rako kuAustria, mutengo wekufamba unogona kunge uri $117 pazuva, iri avhareji yemutengo wezuva nezuva zvichienderana nemashandisirwo evaenzi vekare. Paavhareji,
Yunivhesiti Dzakanakisisa muAustria
March 19, 2020 Shubham Sharma Ositiriya, kudzidza, famba
Austria, nyika diki iripo muEurope asi kunaka kwedzidzo yekuyunivhesiti muAustria kunozivikanwa pasi rese. Mayunivhesiti mazhinji munyika anomirira kwazvo pasirese. Chinhu chakanakisa nezveAustria ndechekuti dzidzo
Hutano hwehutano uye zvipatara zvakanaka nemakiriniki
February 2, 2020 Demi Ositiriya, utano
Austria inopa imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekuchengetedza hutano pasirese. Uye kuwana kune zvekurapa masevhisi kunoonekwa kunge kwakakwana mune zvepasi rose mazwi. Iyo yakakwira mitengo yemitengo inowedzera mumakore apfuura. Uye nzira iyo kugona
January 31, 2020 Demi Ositiriya, kudzidza
Austria haisi kungowanikwa pakati peEurope - asi nyika yakaitawo basa rakakosha munhoroondo yeEurope. Kune zvikonzero zvakawanda zvekudzidza muAustria, kusanganisira akati wandei mayunivhesiti ayo anoverengeka pakati peiyo